» पुर्वराजा र राजावादिहरु, राष्ट्रवादी हुँदै होइनन:-डा.बाबुराम भट्टराई ,तपाईं के भन्नुहुन्छ? पुर्वराजा र राजावादिहरु, राष्ट्रवादी हुँदै होइनन:-डा.बाबुराम भट्टराई ,तपाईं के भन्नुहुन्छ? – हाम्रो खबर
पुर्वराजा र राजावादिहरु, राष्ट्रवादी हुँदै होइनन:-डा.बाबुराम भट्टराई ,तपाईं के भन्नुहुन्छ?
काठमाडाैं, १२ मंसिर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघिय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा र राजावादीहरु राष्ट्रवादी नभएको बताउनुभएकाे छ ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा भएको राजावादीहरुको प्रदर्शनप्रति इंगित गदै उहाँले पूर्वराजा र राजावादीहरुले अरू जेसुकै दावी गरे पनि आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ भनेर भन्न नहुने बताउनुभएकाे छ । उहाँले राजवादीहरुले देशभित्र र बाहिर धर्मको राजनीति गरिरहेको र त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझेको समेत बताउनुभएकाे छ ।
उहाँले राजवादीहरुले देश बाहिर भइरहेको धर्मको राजनीतिसँग राजावादीहरुको सालनाल जोडिएको कुरालाई नेपाली जनताले बुझेको भन्दै भ्रममा नपार्न चेतावनी पनि दिनुभएकाे छ ।
“पूर्व राजा र राजावादीहरूले अरू जेसुकै दावी गरे पनि आफुलाई’राष्ट्रवादी’चैं नभनून्!उनको जस्तो धर्मको राजनीति देशबाहिर कस्ले गरिरहेको छ र त्यसको सालनाल कसरी जोडिएको छ नेपाली जनताले बुझेका छैनन् भन्ने नठानून्,” डा. भट्टराईले ट्वीटरमा लेख्नुभएकाे छ, ” नेपालमा गणतन्त्रको जग हल्लिदा आउने अस्थीरताले देशको भविष्य के हुन्छ सोचून् !”
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्र आधुनिक नेपालरूपी खाटका ४ खुट्टा भएको डा. भट्टराईले बताउनुभएको छ । यी मध्ये कुनै एक खुट्टा भाचिच्दा पुरै खाट लड्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र आधुनिक नेपालरूपी खाटका चार खुट्टा हुन्। यीमध्ये कुनै एक खुट्टा भॉचिँदा पूरै खाट लड्छ। यो वैज्ञानिक तथ्य विभिन्न पार्टीभित्र रहेका छद्म राजावादी, एकल धर्मवादी, संघीयता विरोधीहरूले बेलैमा बुझून्। चकचके बॉदरको कथामा झैं आफ्नै अण्डकोष नफोरून् !’, उहाँले लेख्नुभएकाे छ ।